Mumakungwa asina mahombekombe enzvimbo anopenya zuva repakati, pane zvemweya, uye risingaoneki. Kudenga ndiwo muviri wake, mweya nemweya; uye mushure meiyi yakanakira modhi yakarongedzwa ZVESE ZVINHU. Aya matatu matatu ehupenyu hupenyu hutatu, iwo madhigirii matatu ehunhu hwePleroma, iwo matatu "zviso zveKabalistic," zveCHEMAI yekare, vatsvene vevakweguru, En-Soph, ane chimiro "uye ipapo fomu. "
Vol. 1 NOVEMBER, 1904. Nha. 2
Copyright, 1904, neHW PERCIVAL.
ICHI kudikanwa kuri kukura kwemagazini iyo mapeji ayo anozovhura kune yakasununguka uye isina rusaruro mharidzo yehuzivi, sainzi, uye chitendero, pahwaro hwetsika. SHOKO rakagadzirirwa kugovera icho chinodiwa. Maitiro anovakwa pane hama.
Icho chinangwa chedu kupa nzvimbo kune zvinyorwa zvakanyorwa mukufambisa chero kufamba chero bedzi chinhu chikuru ndechokushandira hama yehukama.
Hwemhuri ndeimwe mhuri huru, zvisinei yakaparadzaniswa zvakanyanya nekusarura kwerudzi nekutenda. Isu tine kutenda kwechokwadi kwepfungwa iyo inongotsanangurwa zvishoma neshoko, "mukoma." Zvinoreva izwi iri rinogumira kumunhu wega, nemafungiro ake, maitiro, dzidzo, uye kukura. Pane musiyano mukuru wemafungiro pamusoro pechinoreva izwi rekuti hama sezvo paine maringe neshoko rekuti Chokwadi. Kumwana mudiki, izwi rekuti “hama” rinotakura pamwe chete nerubatsiro rwekudzivirirwa neanogona kuzvidzivirira kubva kune vadzivisi varo. Zvinoreva kune mukoma mukuru kuti ane munhu wekudzivirira. Kune nhengo yechechi, yenzanga yakavanzika kana kirabhu, inoratidza kuva nhengo. Anoshamwaridzana anoibatanidza nekugovana kana kushanda pamwe, mune yehupfumi pfungwa.
Yakapfekedzwa, kupofumadzwa uye kudhakwa nekufungidzira munyika inoshungurudzika, mweya hauzive chinzvimbo chaicho kune vamwe mweya yavo.
Ukama ihwohwo indissoluble hukama huripo pakati pemweya nemweya. Matanho ese ehupenyu anowanzo dzidzisa mweya chokwadi ichi. Mushure mekufunda kwenguva refu uye kuramba uchienderera mberi, inosvika nguva yekuti hukama hunonzwisisika. Ipapo mweya unozviziva icho ichokwadi. Izvi zvinouya sekupenya kwemwenje. Kuvhenekerwa kwekuvhenekera kunouya kune wese kune imwe nguva mune hupenyu, sekutanga kubatana kwemweya nemuviri wayo, kumutsa kwekuziva munyika semwana, uye panguva yekufa. Iko kupenya kunouya, kuenda, uye kukanganwika.
Pane zvikamu zviviri zvekuvhenekera izvo zvakasarudzika kubva pamusoro, kupenya kwekuvhenekera panguva yaamai, uye kuvhenekerwa kweHama weHumanity. Tinoziva kuti mwedzi mirefu yekurwadziwa uye kusagadzikana nekusuwa, izvo zvinotungamira kuberekwa kwemwana, zvinomutsa manzwiro a "amai". Panguva yekuchema kwekutanga kwemucheche akazvarwa, uye panguva iyo paanonzwa hupenyu hwake kuenda kunze kwairi, pane chakavanzika chakaziviswa kumoyo "waamai". Iye anoona kuburikidza nemasuwo eUpenyu hwenyika hukuru, uye kwechinguvana anopenyera mukuziva kwake kunakidzwa, iro chiyedza chechiedza, nyika yeruzivo, ichimuzivisa kwaari chokwadi chekuti kune humwe humwe humwe hunhu, kunyange zvake asiri iye. Mune ino nguva panouya kunzwa kwekufara, pfungwa yekubatana, uye yekusagadzikana kubatana pakati pechimwe chinhu uye chimwe. Iko kutaura kwakakwana kwazvo kwekusava noudyire, kweukama, hwerudo, hwatinahwo mune hwedu ruzivo. Iwo mwenje unopfuura uye uchikanganikwa. Iyo rudo, kazhinji, inokurumidza inodonha mukati meiyo yeanamai vezuva nezuva, uye inonyura kusvika kune zera rekuzvida kwevakadzi.
Pane fananidzo pakati pekuziva kwehukama hwemwana kuna mai vake, uye hukama hwemurume akazvarwa kaviri kunaAman kana Universal Self. Amai vacho vanonzwa hukama uye kuda kwemwana wavo nekuti, panguva iyoyo isinganzwisisike, imwe yemaketeni ehupenyu anoswededzwa parutivi uye pane musangano, nzwisiso, pakati pemweya waamai uye nemweya wemwana, uyo unofanirwa kuchengetedza nekuchengetedza, uye nezvewe uyo unofanirwa kuchengetedzwa.
Iyo neophyte, kuburikidza nehupenyu hwakawanda hwekushuvira uye kushuva kwechiedza chemweya, pakupedzisira inosvika panguva apo mwenje inopaza mukati. Anouya kuchinangwa ichi mushure memazuva mazhinji pasi, mushure mehupenyu hwakawanda mune zvese zvikamu, mamiriro, mamiriro, nevanhu vazhinji , mune nyika dzakawanda, munguva dzakawanda. Paanenge apfuura zvese, anonzwisisa hunhu uye tsitsi, mufaro uye kutya, zvishuviro uye zvishuwo zvevamwe varume vake - avo vamwe vake. Ikoko kwakazvarwa munyika yake kuziva kutsva: kuziva kwehama. Izwi revanhu rinomutsa moyo wake. Ruzha rwakafanana nekuchema kwemucheche achangozvarwa kusvika munzeve ya "mai vake". Zvizhinji: kune hukama huviri. Iye anonzwa hukama hwake kune Hukuru Mubereki Mhepo sezvinoita mwana kune mubereki wake. Iye zvakare anonzwa kuda kudzivirira nekudzivirira, kunyangwe amai vaizodzivirira mwana wavo. Hapana mazwi achatsanangura kuziva uku. Nyika inovhenekerwa. Kuziva kweMweya weVese kumuka mune iyo. Iye ihama. Iye anozvarwa kaviri, akaberekwa kaviri.
Sezvo kuchema kwemucheche kunomutsa muna mai hupenyu hutsva, saiwo zvekare kumurume wakamutswa hupenyu hwakavhurika. Mukurira kwemusika-nzvimbo, mukunyarara kwegwenga risina mwedzi, kana kana ari oga achifungisisa zvakadzika, anonzwa kuchema kweGreat Orphan vanhu.
Uku kudana kunovhura kwaari hupenyu hutsva, mabasa matsva, mabasa matsva. Sezvinoita mwana kuna mai vake ndizvo zvakaitawo vanhu kwaari. Anonzwa kuchema kwayo uye anonzwa hupenyu hwake kuti ubude. Hapana chingamugutsa kunze kwehupenyu hwakapihwa kune hwakanaka hwevanhu. Anoda kuzviriritira sababa, kuzviriritisa saamai, kuzvidzivirira sehama.
Munhu haasati apinda mukuziva kwakazara kweukama, asi angangofungisisa nezvazvo, otanga kuisa zvirevo zvake mukuita.